ဖြူးချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ ကျပ်သိန်းထောင်ချီ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးဟု - Yangon Media Group
ဖြူးချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ ကျပ်သိန်းထောင်ချီ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးဟု
ဖြူး၊ အောက်တိုဘာ ၁
ဖြူး ချောင်းရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးစက်ရုံမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား ခဲ့ရာ ကျပ်သိန်းထောင်ချီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်၊ ည ၁ဝ နာရီခွဲခန့်က ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့နယ်အနောက်ဘက် မင်းကံရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒိုင်းတရာကျေးရွာအနီးရှိ ဖြူးချောင်းရေ အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တွင် VCB VACCUMCIRC URT-BRAKER ဝိုင်ယာရှောစ့် ဖြစ်ကာ ပေါက်ကွဲခဲ့ရာမှ အနီးရှိ ၂၃ KVA/ 11KV ထရန်စဖော်မာများအား ကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံမှမီးလောင်မှုကို အမြန်လမ်းမီး သတ်စခန်း(၁၁၅)မိုင်သို့ အကြောင်း ကြားခဲ့သဖြင့် အမြန်လမ်းမီးသတ် စခန်းမှ မီးသတ်ကားတစ်စီး၊ ဖြူး မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ် ကားနှစ်စီးနှင့် ညောင်ခြေထောက် အရန်မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်ကား တစ်စီးတို့ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်၊ နံနက်အစော ပိုင်းတွင် မီးငြှိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”ဝိုင်ယာရှော့စ်ဖြစ်ပြီးလောင်တယ်လို့သိရတယ်။ အဲဒီနေရာက ဖုန်းလိုင်းမမိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို လာအကြောင်းကြားလာတာနဲ့ မီး သတ်ကားနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ မီးသတ် ရေယာဉ်တွေနဲ့သွားပြီး ငြှိမ်းသတ်ခဲ့တယ်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးက တော့ အတိအကျခန့်မှန်းလို့မရ သေးဘူး။ ပညာရှင်တွေနဲ့သေချာတွက်ချက်မှ အတိအကျသိရမယ်။အကြမ်းဖျင်းတော့ ပျက်စီးဆုံးမှု တန်ဖိုးက ကျပ်သိန်းထောင်ချီရှိနိုင်ပါတယ်”ဟု နယ်မြေခံမီးသတ်တပ် ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွင်လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ထိခိုက်မှုမရှိသော်လည်းကျပ်သိန်းထောင်နှင့်ချီ၍ပျက် စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ နေရာ သို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်ကသွားရောက်စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြူးချောင်းရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံသည် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပိုင်ဖြစ်ပြီး ရေလှောင်တမံအား ဖြူးချောင်း ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ကာ အလျား ၁ဝ၂ဝပေ၊ အနံ ၁၁ဝ ပေ၊ အမြင့် ၁၁ဝ ပေရှိသည်။ ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ ခုနှစ်က စတင်တည် ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ် ၉ ရက်တွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရေလှောင်တမံမှာ ဖုန်အမျိုးအစား ကျောက်ဖြည့်တမံအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
မိုရာတာ၏ ဒဏ်ရာအခြေအနေ စိုးရိမ်ရခြင်း မရှိရန် နည်းပြကွန်တီ မျှော်လင့်
မောင်တောဒေသတွင် လုံခြုံစိတ်ချရသော လူမှုစီးပွားဘဝ ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေ?
ပြည်သူတစ်ဦးချင်းအပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူများမှလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရလိုသည့်စိတ် ??
နာပိုလီနှင့်ခြေစမ်းပွဲတွင် အလစ်ဆန် ကစားနိုင်မည်ဟု ကလော့ပ် ဆို
MoU ထိုးထားသည့် လုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရန် လဝကနှင့် ကုလအဖွဲ့အစည်းတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဧက ၃ဝဝ ခန့် ကျယ်ဝန်းသည့် ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံ မီးလောင်မှု နှစ်ရက်ကျော်သည်အထိ မီးခိုးများ အဆမတန်
ယာယီ ပိတ်ခိုင်းထားသည့် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးတော့မည် မဟုတ်